Deg Deg: Ciidamada Aljeeriya waxay ku duqeeyeen Tel Aviv iyo magaalooyin kale oo Israel ku yaala gantaallada dheereya ee qaaaradaha isaga gudba. – ASM Raage
Deg Deg: Ciidamada Aljeeriya waxay ku duqeeyeen Tel Aviv iyo magaalooyin kale oo Israel ku yaala gantaallada dheereya ee qaaaradaha isaga gudba.
Posted byabdullahi87 May 10, 2021 Posted inwararka somaliga ah
Guutoyin katirtaraan Taangiyada dowlada Urdun waxay u ruuqan sadeen dhanka xuduudaha israel iyagoo weerarka ka qaaday dhanka bari.
Masarna waxay furaysaa kalabeeyrka Rafah ciidamadeeduna waxay galeen heegan buuxa si ay u taageeraan dadka reer Gaza .
wadanka Sucuudigu waxa uu ciidamaddii ugu badnaa abid ka dejiyay magaalada Qaza si ay u taageeraan ciidamada Masar ee hiil walaal.
ciidama millatry-ga somalia ee harama cad ayaa si lama filaan isugu gadaamay masjidul aqsa iyagoo gar gaar deg deg ah u samaynaya walaalaha ee falastiin ee masjidka sugnaa mudada dheer. sidoo kalana kalana xirxiray maxaa biis aad u farabadan oo ka mid ahaa ciidama israeil.
Weeraradanna illaa iyo hadda waxay sababeen dhimashada boqolaal ka tirsan askarta Israa’iil ,,,Iyo qoysas badan oo iyaga ka mid ah ,,, Netanyahu wuxuu ku baxsaday diyaarad qaas ah oo u qaady qaaday Ameerika.
Golaha amaanka ee qaramada midoobayna waxay hada yelanayaan kulan deg deg ah, iyagoo ugu baaqay dowladaha carabta iyo muslimiinta inay joojiyaan weerarka ay ku hayaan Israel .
Mareykanku wuxuu u diray diyaaradaha xambaara diyaaradaha si ay u caawiyaan Israel, laakiin ciidamada badda ee Marooko ayaa ka hortagay oo kuso riday Badweynta Atlantik,Waxay xireen marinka muhiimka ee loo maro marinka Gibraltar .
kani waa war naga wada farxin lahaa
Maxaa looga hadlay kulankii madaxda puntland iyo Waftiga Qaramada Midoobey ee Garoowe.
Wararkii ugu dambeeyay Shaqaaqooyin ka taagan Falastiin